Clash of Clans အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - APKTom
14.211.13 for Android
4.5 | 500,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် APK（175.4MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Clash of Clans
သင်၏ရွာကိုတည်ဆောက်စဉ်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိသန်းနှင့်ချီသောကစားသမားများနှင့်ပူးပေါင်းပါ, မျိုးနွယ်စုများကိုမြှင့်တင်ပြီး Epic Clan Wars တွင်ယှဉ်ပြိုင်ပါ။ ပ cl ိပက္ခလောကကိုဝင်ပါ။
● Triple Storefes ကိုနောက်ဆုံးပေါ်စူပါ Troops အပြင် - Tire Streop Lever!
●စစ်လှူဒါန်းခြင်းနှင့်သူရဲကောင်းအသားအရေကျပန်းခြင်းမှ XP အပါအ0င်ဘဝ၏ဘဝအပြောင်းအလဲများကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်အရည်အသွေး -
clan clan features: ●ကစားသမားချင်းများနှင့် ပူးပေါင်း. သူငယ်ချင်းများနှင့် ပူးပေါင်း. သူငယ်ချင်းများကိုပူးပေါင်းပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောတက်ကြွသောကစားသမားများအပေါ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေဖြင့်မျိုးနွယ်စုစစ်ပွဲများတွင်ပါ0င်သည်။
●ရန်သူတိုက်ခိုက်မှုများကိုတာ0န်များ, ဗုံးများ, ထောင်ချောက်များ, Mortars များနှင့်နံရံများနှင့်နံရံများဖြင့်ကာကွယ်ပါ။
● Barbarian King, Archer Queen, Royal Champing နှင့် Battle Machine တို့ကဲ့သို့သောမော်ကွန်းသူရဲကောင်းများကိုဖန်တီးခြင်း။ ●သင်၏တပ်များ, စာလုံးပေါင်းများနှင့်ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့မှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်သင်၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်ရန်သင်၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်ရန်။
●ဖော်ရွေသောစိန်ခေါ်မှုများ, ဖော်ရွေသောစစ်ပွဲများမှတစ်ဆင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင် PVP အတွေ့အကြုံများကိုဖန်တီးပါ။
●စောင့်ကြည့် Callmates သည်အချိန်နှင့်တပြေးညီတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်ခုခံကာကွယ်ခြင်းများကိုကာကွယ်ရန် (သို့) ဗီဒီယိုပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုစစ်ဆေးပါ။
●ဂယက်ရီဘုရင်အားကစားသမားတစ် ဦး တည်းဖြင့်ကစားခြင်းနှင့်သင်၏စစ်တပ်ကိုလေ့လာပြီးသင်၏စစ်တပ်ကိုလေ့လာပါ လက်တွေ့တွင် Clan Cartle တပ်များ။
●ဆောက်တည်ကာအခြေစိုက်စခန်းသို့ သွား. လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကမ္ဘာပေါ်ရှိအဆောက်အအုံများနှင့်ဇာတ်ကောင်အသစ်များကိုရှာဖွေပါ။
ကျေးဇူးပြု. မှတ်သားပါ။ Clans ပ ashes ပ cl ိပက္ခများမှာမူအခမဲ့ဒေါင်းလုပ် လုပ်. ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်, သို့သော်အချို့သောဂိမ်းပစ္စည်းများကိုအစစ်အမှန်ငွေကြေးအတွက်လည်း0ယ်နိုင်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်ကိုသင်မသုံးလိုပါက ကျေးဇူးပြု. In-app ဝယ်ယူမှုများကိုသင်၏စက်၏ဆက်တင်များ၌ပိတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏0န်ဆောင်မှုနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒများ၏စည်းကမ်းချက်များအရသင်သည်မျိုးနွယ်စုများအတွက်ပ cl ိပက္ခများပ cl ိပက္ခများဖြင့်ကစားရန်သို့မဟုတ် download လုပ်ရန်အနည်းဆုံးအသက် 13 နှစ်အရွယ်ရှိရမည်။
Clans များ, အခက်အခဲ, ရန်ပွဲများ, ဘရန်ကြယ်များ, ကမ်းခြေနှင့်မြက်ပင်များကဲ့သို့အခြားစူပါစင်ကြယ်ဂိမ်းများကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်။ သူတို့အားထွက်စစ်ဆေးရန်သေချာပါစေ။
Support - အကြီးအကဲ, မင်းမှာပြ problems နာရှိနေတာလား။ https://help.supercellsupport.com/clash-rot-clash-clans/en/index.html သို့မဟုတ် http://vash.cl/Clasharium သို့ဝင်ရောက်ပါသို့မဟုတ် http://supr.cl/cClashorum သို့သွားပါသို့မဟုတ် Settings> Help နှင့် Support သို့သွားပါ။
ဘာအသစ်လဲ Clash of Clans 14.211.13
Clash of Clans Android Gameplay - Part 10 #DroidCheatGaming
Easy Triple! the Last Chance Qualifier Challenge (Clash of Clans) ! COC New Event3Star
HK Gaming Virus
CÁCH ĐÁNH ĐƠN GIẢN NHẤT THỬ THÁCH VÒNG LOẠI Clash of clans | Akari Gaming
AMAZING CLONE SPELL ATTACK!!! TH14 Attack Strategy | Clash of Clans
Clash of Clans 14.211.7
Finnish Defense 1944 (free)
Top Eleven Be Football Manager
Vzjabhy bzjavubzbi zys h yzb ha Uzbek😀😀😀😀😀😀😀😀😀😁😀😀😀😀😀😀😁😁😁😁😁😀😀
Thaw Tar Lin
I like this app, I think it good